နေမကောင်းခွေးအတွက်ဆုတောင်း။ ? ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ဆုတောင်းပြီးသင်၏မိတ်ဆွေကိုသက်သာပျောက်ကင်းအောင်ကူညီပေးပါ။
ဖျားနာနေသောခွေးတစ်ကောင်အတွက်ဆုတောင်းခြင်း။ ခွေးများသည်သံသယမရှိဘဲလူသား၏အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေများဖြစ်သည်။ မိသားစုများကိုပျော်ရွှင်မှုနှင့်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာများယူဆောင်လာစေသည်။ ဒါပေမယ့်ကံမကောင်းတာကအရာရာတိုင်းဟာပန်းတွေမဟုတ်ပါဘူး။ သက်ရှိများအနေဖြင့်သူတို့သည်လည်းဖျားနာခြင်း၊ ဂရုစိုက်ခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ဖျားနာနေသောခွေးတစ်ကောင်အတွက်ဆုတောင်းခြင်းသည်သင်နှင့်သင်၏မိသားစုကိုစိတ်ပျက်အားငယ်စေသည့်အချိန်တွင်ငြိမ်သက်စေသည်။ သင်၏ခွေးသည်ဘုရားသခင့်သတ္တဝါတစ်ပါးလည်း ဖြစ်၍ ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချမှုဖြင့်တောင်းခံလျှင်ဘုရားသခင်ကကောင်းချီးခံစားရလိမ့်မည်။
“ ကောင်းကင်ဘုံရှင်အဘ၊ သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကို (အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ရဲ့နာမည်) ၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သင်အလိုရှိပါကသင်၏ကျန်းမာရေးနှင့်ခွန်အားကိုပြန်လည်ရယူပါ။
အိုဘုရားသခင်၊ ကိုယ်တော်သည်မင်္ဂလာရှိတော်မူ၏။ အာမင်။
“ ချစ်လှစွာသောသခင်၊ ကျွန်မချစ်လှစွာသောအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်နှင့်အဖော်၏နာမကျန်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်သင်၏ကိုယ်စားကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ဤလိုအပ်ချက်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်သင်၏အကူအညီတောင်းခံခြင်းဖြစ်သည်။
သင်၏ကောင်းချီးမင်္ဂလာသည်ကျွန်ုပ်၏ချစ်လှစွာသောအပေါင်းအသင်းကိုပျောက်ကင်းစေပြီးကျွန်ုပ်တို့အတူတကွလုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ပို၍ ကောင်းမွန်သောနေ့ရက်များကိုပေးနိုင်ပါစေ။
“ အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်၊ စကြဝာရှိသတ္တဝါအားလုံးတွင်မင်းရဲ့မေတ္တာအလင်းကိုရောင်ပြန်ဟပ်တဲ့အမှတ်အသားကိုဖော်ထုတ်ပေးတဲ့လက်ဆောင်ကိုငါပေးခဲ့တယ်။ ကိုယ်တော်၏အနန္တကျေးဇူးတော်ကြောင့်နှိမ့်ချသောကျေးကျွန်၊ ကျွန်ုပ်အားအပ်နှင်းထားသောဂြိုဟ်သားသတ္တဝါများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်တော်မူပါ။ ကျွန်ုပ်၏မစုံလင်သောလက်များနှင့်ကျွန်ုပ်၏အကန့်အသတ်ရှိသောလူသားအမြင်မှတဆင့်ဤသားရဲအပေါ်ကျရောက်ရန်ကိုယ်တော်၏မြင့်မြတ်သောကရုဏာတော်အတွက်လက်နက်တစ်ခုဖြစ်ပါစေ။
ကျွန်ုပ်ပတ် ၀ န်းကျင်၌ကောင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်၏ကာကွယ်မှုဖြင့်သင်၏အလိုတော်အတိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေ။ အာမင်!
“ လူသားတွေနဲ့လူသားတွေနေထိုင်ပြီးသက်ရှိတွေနေထိုင်နိုင်အောင်ကမ္ဘာပေါ်မှာသက်ရှိသတ္တဝါအားလုံးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဒီသနားကြင်နာတတ်တဲ့ခမည်းတော်ဘုရားသခင်၊ ဒီအိမ်မှာငါနဲ့အတူနေထိုင်တဲ့တိရစ္ဆာန်တွေအားလုံးကိုကာကွယ်ပေးတဲ့ကျွန်တော့် Guardian Angel ဆီကို။
မင်းရဲ့အိမ်မက်တွေငြိမ်းချမ်းပါစေ၊ မင်းရဲ့ဝိညာဉ်ကငါတို့မျှဝေတဲ့ဒီဘ ၀ မှာအလှအပနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုနယ်ပယ်ဆီကို ဦး တည်ပါစေ။
Archangel Ariel သည်ဘုရားသခင်အားတိရိစ္ဆာန်များအားလုံးကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့သောလက်ဆောင်ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင့်ကုသမှုဆုကျေးဇူးကိုရရှိခဲ့သောကောင်းကင်တမန်မင်း Raphael သည်ယခုအချိန်တွင်ဤချိုသောသတ္တဝါ၏အသက်ကို (မွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်၏နာမကိုပြောပါ) ၏အလင်းကိုပြရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တောင်းဆိုသည်။
ဘုရားသခင်၏ကရုဏာတော်သည်သူ၏ကျန်းမာရေးကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်စေပါစေ။ သို့မှသာသူသည်သူ၏ရောက်ရှိခြင်းနှင့်သူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်းမှတဖန် ၀ မ်းမြောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိကောင်းသော ၀ ိညာဉ်များကိုကာကွယ် ပေး၍ သင်၏အလိုတော်အတိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေ။ အာမင်။
ကောင်းကင်ဘုံရှင်အဘ၊ အခြားမျိုးနွယ်များမှကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဆွေများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လူသားဆက်ဆံရေးသည်မင်းထံမှအံ့သြဖွယ်ကောင်းပြီးအထူးလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့၏တိရိစ္ဆာန်များအားသူတို့၏အထူးမိဘအုပ်ထိန်းမှုနှင့်ကုသမှုစွမ်းအားကိုပေးပါရန်ငါတောင်းခံသည်။ မင်းရဲ့လူသားမိတ်ဆွေတွေ၊ ငါတို့ရဲ့တာဝန်တွေကိုနားလည်မှုအသစ်တစ်ခုပေးပါ။
ငါတို့ကိုယုံတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်များနှင့်သူတို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ချစ်ခင်မှုနှင့်ချစ်ခင်မှုတည်ဆောက်ရန်ဤကမ္ဘာပေါ်တွင်အတူတကွရှိနေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်ဆုတောင်းပြီးသင်၏အနာရောဂါစွဲနေသောတိရိစ္ဆာန်များကိုခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိအားနည်းချက်များကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်အလင်းနှင့်အစွမ်းခွန်အားနှင့်ဖြည့်စွက်ပါ။ သခင်၊ သင့်လိုအပ်ချက်များကိုတိတိကျကျဖော်ပြပါ (အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၏အမည်ကိုပြောပါ) ။
သူ၏ကောင်းမြတ်မှုသည်သက်ရှိသတ္တဝါအားလုံးနှင့်ဆက်စပ်နေပြီးသူ၏ကျေးဇူးတော်သည်သူ၏သတ္တဝါအားလုံးဆီသို့စီးဆင်းသွားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ဝိညာဉ်၌ကောင်းသောစွမ်းအင်များ၊ ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး စီကိုသူတို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းနှင့်ထိတွေ့ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏တိရိစ္ဆာန်အဖော်များကိုရှည်လျား။ ကျန်းမာသန်စွမ်းသောအသက်တာများကိုပေးစွမ်းပါ။ သူတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့နှင့်ကောင်းသောဆက်ဆံရေးပေးပါ။ အကယ်၍ သခင်ကသူတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့မှနှုတ်ယူရန်ဆုံးဖြတ်ပါက၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူမရှိတော့ကြောင်းနားလည်ပြီးသခင်နှင့်သာနီးကပ်လာသည်။ သတ္တဝါအားလုံး၌သင့်ကိုဂုဏ်တင်သောကောင်းသောစိန့်ဖရန့်စစ်စစ္စလီ၏ကြားဝင်အသနားခံခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးပါ။ ငါတို့၏တိရိစ္ဆာန်သူငယ်ချင်းများကိုထာဝရကာလ၌ထာဝရဘုရားသခင်နှင့်လုံခြုံမှုမရှိမချင်းစောင့်ကြည့်နိုင်သည့်တန်ခိုးပေးတော်မူပါ။ အာမင်။
ရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်း၊ ချစ်ခြင်းနှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်း၏သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်သော San Francisco၊
ငါချစ်သော San Chiquinho, မင်းကိုလိုအပ်နေတဲ့ဒီတိရစ္ဆာန်ရဲ့နာမည်ပြောပါ။ သင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုသိရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့၏တောင်းဆိုမှုကိုလိုက်နာပါ။
ဖျားနာနေသောခွေးများအတွက်ဆုတောင်းခြင်းကိုသင်ယခုသိပြီ ဖြစ်၍ ဖျားနာနေသောတိရိစ္ဆာန်များအတွက်အစွမ်းထက်သောဆုတောင်းချက်များကိုလည်းသင်ယူပါ။
San Antonio Matchmaker ၏ဆုတောင်းချက်ကိုလေ့လာပါ